Yintoni eNtsha kwi-AutoCAD 2012 | Iintlobo-zeGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Yintoni Entsha AutoCAD 2012 | ukuthambekela
Thina iintsuku ezimbalwa ukubona isilumkiso wokuqala oko kubu- AutoCAD 2012, Iprojekthi eyenziwe njenge-Iron-man. Phambi kokuba yenzeke loo nto, bendiphonononge iingcinga zam kwasekuqaleni konyaka kwaye ndithelekisa nokuvuza okukhutshwe ngabathengisi bendawo.
Oku kulandelayo yitshathi yokuthelekisa yeendaba esizibonileyo kwiinguqulelo ezine zokugqibela ze-AutoCAD. Ngelixa mininzi eminye imiyalelo esele ikho ephuculweyo, le yinto entsha kuphela ebalaseleyo minyaka le.
Kuyakuthi kuqaphele ukuba impembelelo enkulu ye-2008 yayikukwazi ukusebenzisana (ukungenisa) ngefomathi zeDGN kunye nento nge-Excel.
Emva koko kwi-2009 utshintsho olukhulu lu iRibhoni Oko ekuqaleni kwakubonakala ngathi kukhulu kuthi, kodwa ukuba phakathi kuka-2010 no-2011 kuye kwakho ukunyanzeliswa kokuphepha uphazamiseko oluncinci kwindawo yokusebenza kunye nokwenza ubuqu. Kwakhona kwinqanaba lokuhamba, i-ViewCube yayiyinto entsha.
Kwi-AutoCAD 2010, imithintelo eyenza i-vectors ibonakale ingqiqo, kunye nokuphuculwa kolawulo lwe-3D, ukuphathwa kweefayile zePS kunye nenkxaso ye-3D iphrinta.
Kwizinto ezintsha ze-AutoCAD 2011 ebonakalayo, kunzima ukuqonda ukuba kutheni ukuvela kwezinto kunye nolawulo lwezinto ezifanayo zithathe ixesha elide. Inkxaso yelifu lwenqaku iluncedo kakhulu, kwaye ukuqhubekeka nophuculo ukusukela ngo-2010, ukuphathwa kwemiphezulu ye-3D kuyaphuculwa.
A maPiltileaders Phuculwa
Iinkcukacha ezidibanisa ne-Excel
I-DGN 8 yokungenisa, ukuthumela ngaphandle, nokugqithisa
iRibhoni Phuculwa Phuculwa
Autodesk Impression Phuculwa
Autodesk Funa Phuculwa
Recorder Action Phuculwa Phuculwa
Imiqobo yeGeometric Phuculwa
Iintsilelo zeMida Phuculwa
UkuHlelwa kweekhonkco Phuculwa
Ngaphantsi kwe PDF
Ifayile yeFayile yeCUIx
Umxholo / Uluhlu lokubala
Fihla / Ukukhupha izinto
Khetha Izinto ezifanayo
Yenza Izinto ezifanayo
Inkxaso ye Cloud Point
Ukuphucula i-0 kwiindaba ezivela kwiminyaka edlulileyo
Ukuphucula i-5 kwiindaba ezivela kwiminyaka edlulileyo
Ukuphucula i-7 kwiindaba ezivela kwiminyaka edlulileyo
Ngoko, ekujonge okwenzekileyo kwiminyaka emine edlulileyo, sinokucinga ezi zinto zilandelayo:
1. Ukwenziwa kwezinto ezintsha ngakumbi kwi-AutoCAD 2012.
Njengoko kubonwe kwimbali, iinguqulelo ze-AutoCAD zihlala zinobuchule, ngelixa ezo zingathandekiyo zigxila ekuqhubekekeni kophuculo lwangaphambili. Kungenxa yoko le nto sikhumbula kakhulu njengeenguqulelo R12, 1998, 2000, 2002, 2006; kwaye uyayibona le meko kuhlobo luka-2010 xa kuthelekiswa nango-2011.
Emva koko, inguqu ye-AutoCAD 2012 sinokulindela ezinye iindaba zendalo jikelele, kunokugxila kwimicimbi ethile.
2. Ukukhangela ukuphucula ukusebenza kweqela.
Phakathi kwezinto ezintsha, kukholelwa ukuba i-AutoCAD 2012 inokuzisa ukusebenza okungcono kulawulo lweembono. Xa sithetha ngeembono, sithetha ngemiboniso yeendawo ezahlukileyo zomzobo, ngokwembono eyahlukileyo, ngeendlela ezahlukeneyo ezifihliweyo, kwaye zisebenza ngamandla. Ukutshintsha ukusuka kwimbono enye ukuya kwenye akuthethi ukuvuselelwa komzobo, ngelixa kunokuba luncedo ngakumbi ekusebenzeni neemonitha ezininzi ngaxeshanye.
Ezi nkqubo zokhuphiswano zibizwa ngokuba yiDynamic Views, kwaye zakhiwe kakuhle ziza kuphucula ukusebenza kwezixhobo, kuba ngandlela-thile isebenza njengenkcazo yendawo esekelwe ekuthunjweni engekho kwimemori efanayo okanye idinga inkqubo eyongezelelweyo.
Ndiyathandabuza ukuba ingaqhubeka inguqulo efana nendawo phakathi kweWindows version kunye AutoCAD kwi-Mac. Kuba nge-White Manzanita, ukumilisela olu hlobo lotshintsho akufuneki kuthandaze kakhulu kwabangcwele, kodwa ngendlela abaproseshi bePC abasebenza ngayo kunye nolawulo lwezixhobo lweWindows, izinto zahlukile. Kunokwenzeka ukuba kwi-Mac sinokubona ukusebenza ngokuchanekileyo kwexesha lokwenyani okanye ukulawulwa kwelifu, kodwa kwi-PC AutoDesk iya kuqala ukucinga ngokuthumela iinkqubo ezininzi kusetyenziswa izixhobo ezixhasa amakhadi emizobo kweli nqanaba kwaye ke sisuka kwi-PC ephelelwe lixesha GPU.
Okwangoku, ukusebenza kwe-3D AutoCAD 2011 kufuna iprosesa ye-Intel Pentium 4 okanye i-AMD Athlon, 3 GHz; Ngaphandle koko i-Intel okanye i-AMD emibini-core kunye ne-2 GHz. 2 GB RAM. Njengoko sinokubona, ayisiyiyo eyona nto iphambili kwikhonkco lokutya eyona nto yenziwe zii-PC, kodwa xa i-AutoDesk isithi "okanye nangaphezulu" oko kuthetha ukuba kweso sixhobo inkqubo iqhuba, kodwa ineota yehlazo elibi kwinxalenye yomsebenzisi.
3. Ukuphuculwa kweendaba zangaphambili, hayi kakhulu.
Ukubona imeko, sinokuba nokuphuculwa okutsha kulawulo lweRibhoni, mhlawumbi ukubanakho ukuyikhulula ithe nkqo ukuze kusetyenziswe ngakumbi indawo yokusebenzela kubabeki esanda banzi yonke imihla okanye xa kusenziwa umsebenzi wokubeka esweni uninzi. Nangona koku ndinamathandabuzo, kusenokwenzeka ukuba sinokwenza ngokwezifiso ngakumbi, kwaye sikhawuleze oko sikusebenzisa rhoqo, kodwa sihlala siphezulu phaya.
Kwakhona kwi into siye sabona ukuphucula 3D ubunakho, leyo waqala kokuphatha gauze, ngoko imiphezulu, silindele ukuphucuka kwinkqubo sokufaka, okukhokelela izimbo basindiswe ezisebenza ukuba iimpukane ngaphezulu kahle iimbono ezinamandla. Mhlawumbi ulawulo lwezixhobo kunye nesicelo sabo sisebenza ngakumbi kunoko ngoku.
4. Ukulawulwa kwezinto ezingcono
Apha kuyathenjwa ukuba izinto zinokudityaniswa ngokudibeneyo, kungenziwanga ukuba zenziwe iibhloko. Susa, beka izinto ezintsha, zolule, ulinganise, iqela lezinto eligcina iimpawu ezinje ngobungakanani bokubhaliweyo, isimbo sokulinganisa, isikali somgangatho wesitayile njengoko zingaselilo ibloko leebanjwa. Ndingalucinga olu ncedo lokulawula izinto ngeempawu endaweni yokwenza iibhloko okanye ukuzihambisa ziye kwinqanaba elithile.
Kananjalo ngale ndlela, kuyathenjwa ukuba uluhlu lomyalelo lunokuphuculwa ukuze lusebenze kwindlela, efanayo nale siyenzayo ngomyalelo wokulinganisa ngeebhloko. Kodwa ngobubanzi be-3D, kwaye mhlawumbi ngokusuka kumfanekiso ukuya komnye, oya kuthi ubanike umdla wokubamba uyilo olungaqhelekanga lwe-3D.
Siza kubona kwiintsuku ezimbalwa ezenzekayo kwiintsuku ezimbalwa.
Ndicinga ukuba awufundanga ngokucothayo. Uthi "Kunokwenzeka ukuba kwiMac sibona unikezelo lwexesha lokwenyani okanye ulawulo lwamafu olusebenzayo ngakumbi. ”…
Ukubhekiselele kwinguqu ezayo ye-AutoCAD ye-Mac, apho kude kube ngoku kukho kuphela i-2011 version, kwaye njengokuba kunokwenzeka.
Nokuba siza kuyibona okanye akunjalo ngumba wexesha. Ndikunika isizathu sokuba le nto ilahlekile, ngaphandle kwemizamo esiyibonileyo kumaqonga athi, ukusebenzisa ubuchwephesha beCUDA, sele benze unikezelo lusebenza ngakumbi, njengoko sibonile kwiGeoTec ngo-2008. ukusuka kwinto esele siyibona, xa uqala ukusebenzisa ithuba lokufunda okuninzi.
Kuyandiphambanisa ukucinga ukuba nayiphi na iMac inokubonelela ngexesha langempela. Inyani yile yokuba ekunikezelweni yiGPU akukho ndawo i-paniales, uNvidia (umboneleli wamakhadi emizobo yorhwebo kunye nobungcali kwi-pc kunye neapile) akananto ingako ngetekhnoloji ye-CUDA, i-V-reyi kunye nezinye iinkokheli ezibonelelayo zikwiinguqulelo ezibi kakhulu ngexesha lokwenyani
Ndiyakholelwa ukuba le ngxelo ingacaciswanga kwaye ayilunganga kakuhle, engenakho ulwazi oluthile kunye nemithombo engathembekiyo